सबै सच्चिन जरुरी : RajdhaniDaily.com
दीपशंकर चौलागाई - June 17, 2021 0
दोलखा । चीनको स्वाशासित क्षेत्र तिब्बतसंग जोडिएको दोलखाको बिगु गाउँपालिका १ लप्ची क्षेत्रबाट लामाबगर फर्किदै गरेका २२ जना नागरिकलाई आज नेपाली सेना र प्रहरीले...
सर्वोच्चलाई प्रधानमन्त्रीको जवाफ : अदालतले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सक्दैन
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अदालतले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न नसक्ने दाबी गरेका छन् । सर्वाेच्चको आदेशपछि अदालतमा लिखित जवाफ दिएका प्रधानमन्त्री ओलीले अदालतले...
जसपा विवाद : भट्टराई र यादव समुह अदालत जाने
सुभाष साह - June 16, 2021 0
काठमाडौं । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) संघीय परिषदका अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराई र अध्यक्ष उपेन्द्र यादव समुहले निर्वाचन आयोगको निर्णय एकपक्षी भएको आरोप लगाएको...
युरोकपः इटाली नकआउट चरणमा
एजेन्सी - June 17, 2021 0
रोम । यूरोकपअन्तर्गत लगातार दुई खेल जितेर समुह ‘ए’ बाट ६ अंक जोड्दै इटाली नकआउट चरणमा प्रवेश गरेको छ । स्वीट्जरल्याण्ड्लाई ३–० ले हराउँदै...
राजधानी समाचारदाता - June 16, 2021 0
काठमाडौं । आगामी भदौमा फिलिपिन्समा आयोजना हुने एसियन भलिबल च्याम्पियनसिपका लागि नेपाली महिला राष्ट्रिय टोलीको मंगलबारदेखि प्रशिक्षण सुरु गरेको छ । टोलीले त्रिपुरेश्वरस्थित राष्ट्रिय...
युरोकपमा रोनाल्डोको जादु र फ्रान्सको प्रभाव कायमै
म्युनिख । यूरोकपअन्तर्गत गएराति सम्पन्न खेलमा फ्रान्स र पोर्चुगलले जीतसँगै सुखद सुरुवात गरेका छन् । पोर्चुगलले हंगेरीलाई ३–० र फ्रान्सले जर्मनीलाई १–० ले पराजित...
Home बिचार सबै सच्चिन जरुरी
देशमा अहिले सबैभन्दा ठूलो चिन्ताको विषय राजनीतिमा देखिएको अस्थिरता र अन्योलता हुन गएको छ । नेपाली जनताले सुखदुःखका साथ आफ्नो जीवन निर्वाह गरिरहेकै छन् । दिनानुदिन हुने विकास निर्माण र अन्य कार्यहरू पनि नियमित ढंगले अगाडि बढिरहेका छन् । कोरोनाको महामारी व्यापक बनेर अघि बढिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा नेपाली राजनीतिले कुन मोड लेला ? भनेर सबैलाई चिन्ताले सताइरहेको छ । देशमा संघीय, संसदीय प्रणाली कायम छ । सरकार निरन्तर अस्तित्वमा छ । राजनीति दलहरू आफ्ना पार्टीका घोषणापत्र तथा पार्टीद्वारा लक्षित नीति, योजना तथा कार्यक्रमका साथ सशक्त रूपमा अघि बढ्न सकेका छैनन् । सरकार सरकारजस्तो, प्रतिपक्ष प्रतिपक्षजस्तो र राजनीतिक दलहरू राजनीतिक दलजस्ता देखिन छाडेका छन् । यो नेपाली राजनीति तथा यसको राजनीतिक भविष्यका लागि ठूलो चिन्ताको विषय हो । आज नेपाली राजनीति यही संकटको भुमरीमा नाचिरहेको अनूभूत हुन्छ । यो अवस्थाले राजनीतिक दलहरूमा तानातान, छिनाझपटी, देखेस् पखेस् र खोसाखोसको तनावपूर्ण स्थिति त सिर्जना गरेको छ नै त्योभन्दा बढी यसले नेपाली जनतामा ठूलो अन्योलता सिर्जना गरिदिएको छ । यस्तो अवस्थामा राजनीतिक दल र यसका अभिभावक नेताहरूले गम्भीर भएर बेलैमा सोच्नुपर्छ र मिलिजुली समस्याको उचित समाधान निकाल्नुपर्छ ।
देशमा हुने हरेक क्रियाकलाप राजनीति प्रेरित हुन्छन् । राजनीति विगत, वर्तमान र भविष्य हो । विगतका शासन व्यवस्थाभन्दा यो व्यवस्था राम्रो होस्, वर्तमानमा चलिरहेको व्यवस्था र त्यो व्यवस्थाले दिएका सेवा र भविष्यमा योभन्दा राम्रो शासन व्यवस्था होस् र सुविधा प्रदान गरोस् भन्ने आमजनताको चाहना हुन्छ । यी तीनवटै समयबीच तुलनात्मक दृष्टिकोण साधारण जनताले पनि पर्खिरहेका हुन्छन् । वर्तमानलाई डो-याउँदै भविष्यको उज्ज्वल नक्सांकन गर्ने सोच पनि राजनीति नै हो । त्यसैले कोही पनि राजनीतिक सुझबुझ र यसको लगामबिना अघि बढ्न सक्दैन । राजनीतिले नै सबैलाई आशावादी बनाइरहेको हुन्छ । तर, यही राजनीति आजका दिनमा गम्भीर समस्या बनेर देखापरिरहेको छ । शासन व्यवस्थाको अपनत्व लिनु, प्रगतिका लागि सहकार्य गर्नु, भविष्यका लागि प्रतिबद्ध रहनु राजनीतिक दल र यसका नेताहरूको दायित्व तथा अधिकार दुवै हो । तर, यो सर्वव्यापी मान्यतालाई अस्वीकार गर्दै, एकअर्कालाई सिध्याउने, खुइल्याउने, अनावश्यक चुनौती खडा गर्ने र सधैंभरि सत्ता केन्द्रित भएर क्रियाकलाप गरिरहने भएकाले राजनीतिक दलले आजसम्म प्राप्त गरेको राजनीतिक साख र विश्वास गुमाउन थालेका छन् । यसको बोध राजनीतिक दलहरूलाई समयमै हुनु जरुरी छ ।
पटकपटक सत्ता खोसाखोसको खेल खेलिरहने, एकले अर्कालाई असहयोग गर्ने र आफूहरू नै जिन्दगीभर सत्तामा रहनुपर्ने सोचले राजनीतिक दल र तिनका नेताहरूलाई आज जनताबाट टाढा गराएको छ । जनस्तरमा नेता र राजनीतिक दलप्रति गरिने र हुने तिखो टीकाटिप्पणी र घोचपेच सामान्य बन्न गएको छ । हिजोका दिनमा आर्दशका रूपमा रहेका नेताहरू र आफ्ना भविष्य निर्माण गरिदिने पार्टी आज सबैको अविश्वास व्यक्त हुने थलो बन्न पुगेका छन् । नेता र तीनका दलले गर्ने राजनीति हो । पार्टी राजनीतिको आफ्नो स्थान छ । नेताहरूको हैसियत आफ्नो स्थान छ । तर, समग्र देशको राजनीतिको स्थान सबैभन्दा माथि, सबैभन्दा जरुरी र सबैभन्दा श्रेष्ठ हुन्छ । यो कुरालाई मनन गरेर नेताहरू समयमै सतर्क भइरहनु जरुरी हुन्छ । तर, यही राजनीतिक सचेतनाको कमी हुन गयो भने देशको भविष्य कस्तो होला भनी परिकल्पनासमेत गर्न सकिँदैन । त्यसैले, राजनीतिसँग सम्बन्धित सबै दलहरू, यसका नेताहरू समयमै सच्चिनु अत्यावश्यक छ ।
लक्ष्मविलास कोइराला -
उपचारका लागि दिल्ली जानु अघि पार्टी एकता जोगाउन झलनाथको अपिल
काठमाडौं । उपचारका लागि दिल्ली जान लागेका नेकपा एमालेका नेता झलनाथ खनालले पार्टी एकता जोगाउन अपिल गरेका छन् । बुधवार विज्ञप्ती जारी गर्दै नेता खनालले...
११ वर्षपछि स्कटल्यान्डमाथि चेक रिपब्लिकको जित
ग्लास्गो । चेक रिपब्लिकले ११ वर्षपछि स्कटल्यान्डलाई पराजित गरेको छ । युरोपेली च्याम्पियनसिप अन्तर्गत सोमबार राति भएको समूह चरणको खेलमा प्याट्रिक सिकको दुई गोल...
भाइले गोली हाने, दाइले बचाए
तुलसीपुर । सामान्य विवाद हुँदा अमिनलाई गोली हानेको आरोपमा दुई जना पक्राउ परेका छन । पक्राउ पर्नेमा तुलसीपुर उपमहानगरपालिका वडा नं. ८ टिकरी निबासी...
काठमाडौं । विगत डेढ महिनादेखि जारी निषेधाज्ञाका कारण काठमाडौंमा रहेका कतिपय गायक गायिका फुर्सदमा छन् । तर, पछिल्लो समय भाइरल भएका गायक आफिल खानले...
उदयपुरमा भेटिएका संक्रमितले वीरगञ्जका संक्रमितसँगै ३ जिल्ला घुमेको पुष्टि
काठमाडौं । उदयपुरमा भेटिएका १२ जना कोरोना संक्रमित जोगबनी नाका हुँदै नेपाल प्रवेश हुन् । उनीहरु यसअघि वीरगन्जमा भेटिएका संक्रमितसँगै सुनसरी र सप्तरीका कार्यक्रममा...
आइतबार संक्रमित पुष्टि भएका पर्साका सबै भारतबाट आएका
पर्सा । स्वास्थ्य मन्त्रालयले आइतबार संक्रमित पुष्टि गरेका पर्साका सबै संक्रमित केही दिन अगाडी मात्र नेपाल प्रवेश गरेका नेपाली रहेको खुलेको छ । भारतमा...
प्रदेश ५ राजधानी समाचारदाता - August 4, 2020 0
कोहलपुर । नेपाल भारत सीमा नाका जोडिएको बाँके जिल्लामा दिनप्रतिदिन कोरोना संक्रमणका बिरामी थपिँदै जान थालेपछि बाँकेमा जारी निषेधाज्ञा अवधि बढाइएको छ । कोरोना...
सांसददेखि मन्त्रीसम्म स्वास्थ्य सामग्री माग्दै
Editor-Picks प्रशान्त वली - May 20, 2021 0
विज्ञ भन्छन्: सस्तो लोकप्रियता काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले सामग्री पु-याउने काम सांसदको नभएको स्पष्ट पारेको छ । दैनिक सातदेखि आठ सांसद स्वास्थ्य...
अनियन्त्रित कार नालामा खस्दा एक जनाको मृत्यु
Breaking News राजधानी समाचारदाता - November 13, 2020 0
जनकपुरधाम । जनकपुरधाममा कार दुर्घटना हुँदा एक जनाको मृत्यु भएको छ । जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका वडा नम्बर १४ मा बा २० प ६८३१ नम्बरको कार...
एमालेद्वारा सुदूरपश्चिम सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता
Breaking News राजधानी समाचारदाता - May 24, 2021 0
काठमाडौं । नेकपा एमालेले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छ । सोमबार बालुवाटारमा बसेको स्थायी कमिटी बैठकले सो निर्णय लिएको हो ।...
Breaking News राजधानी समाचारदाता - March 30, 2020 0
बुटवल । बुटवलस्थित कोरोना भाइरस विशेष अस्थायी अस्पताल आइसोलेशनमा आइतबार अपराह्न मृत्यु भएका बिरामीको प्रयोगशाला रिपोर्टमा कोरोना भाइरस ‘नेगेटिभ’ देखिएको छ । पाल्पा स्थायी...
बाँस्कोटामाथिको मुद्दा तामेलीमा राख्ने अख्तियारको तयारी
Exclusive राजधानी समाचारदाता - October 21, 2020 0
काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिदका विषयमा ७० करोड रुपैयाँ घुस प्रकरणको आरोप लागेका तत्कालीन सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटालाई मुद्दा चलाउन...
कविता पनि टिकटमा सुनिनुपर्छ
Editor-Picks राजधानी समाचारदाता - December 26, 2020 0
ऊ गएछ समुद्रतिर त्यहाँ उसले समुद्रको जीवनवादी गीत सुनेछ छालहरूको सङ्घर्षमय जीवन नियाँलेछ समुद्रको बालबच्चासँग खुब खेलेछ माछाहरूको प्रेरणादायिक कथा सुनेछ बडेमान जहाजहरूको हर्षाेल्लास देखेछ अनि बुझेछ – दुःखभित्र नै सुख लुप्त...
ब्राजिलमा कोरोना भाइरस संक्रमितको सङ्ख्या १० लाखभन्दा बढी
अन्तराष्ट्रिय राजधानी समाचारदाता - June 20, 2020 0
ब्रासिलिया । ब्राजिलमा कोरोना भाइरस सङ्क्रमितको सङ्ख्या १० लाखभन्दा बढी पुगेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले शनिबार जानकारी गराएको छ । मन्त्रालयका अनुसार विगत २४ घण्टामा ब्राजिलमा कोभिड–१९...
मुस्ताङी सांसद विष्टको सामाजिक कार्य
भर्खरै राजधानी समाचारदाता - May 4, 2020 0
पोखरा । मुस्ताङ्गी सांसद इन्द्रधारा बिष्ट अन्यभन्दा फरक छन् । उनी सदा जनताको दुःखपीर आफ्नो भन्ठान्छन् । नभए हेरौ न लकडाउनका बेला झरि परिरहँदा...
राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – ६ जेठ
कुरी-कुरी राजधानी समाचारदाता - May 20, 2021 0
खुल्यो निषेधाज्ञामा कर उठाउने बाटो
निराजन पौडेल - June 16, 2021
ओपेन्द्र बस्नेत - June 11, 2021